Tsamba kuvaRoma 12:1-21
Ipai miviri yenyu sechibayiro chipenyu (1, 2)
Zvipo zvakasiyana-siyana asi muviri mumwe (3-8)
Mazano emararamiro emuKristu wechokwadi (9-21)
12 Saka hama, ndinokutetererai netsitsi dzaMwari kuti mupe miviri yenyu+ sechibayiro chipenyu uye chitsvene+ chinogamuchirwa naMwari, basa dzvene ramunoita muchishandisa pfungwa dzenyu.+ 2 Uye regai kusiya nyika ino ichikuumbai,* asi pfungwa dzenyu ngadzishandurwe,+ kuti muve vatsva, muzive mega+ kuda kwaMwari kwakanaka, kwaanogamuchira uye kwakakwana. 3 Nekuti nekungonzwirwawo nyasha kwandakaitwa, ndinoudza munhu wese ari pakati penyu kuti arege kufunga nezvake kupfuura zvaanofanira kufunga,+ asi kuti afunge zvinoratidza kuti ane pfungwa dzakanaka, mumwe nemumwe sekupiwa* kwaakaitwa chiyero chekutenda naMwari.+ 4 Nekuti sezvo tiine nhengo zhinji pamuviri mumwe chete,+ asi nhengo dzacho dzisingaiti mabasa akafanana, 5 isu, kunyange zvazvo takawanda, tiri muviri mumwe chete uri pamwe naKristu, asi mumwe nemumwe wedu inhengo yakabatana nedzimwe.+ 6 Saka sezvo tiine zvipo zvakasiyana maererano nenyasha dzatakangoratidzwawo,+ kana chiri chipo chekuprofita, ngatiprofitei zvinoenderana nekutenda kwedu; 7 kana huri ushumiri, ngativei paushumiri uhwu; kana kuti uya anodzidzisa, ngaave pakudzidzisa kwake;+ 8 kana kuti uya anokurudzira, ngaakurudzire;+ uya anopa,* ngaazviite akasununguka;+ uya anotungamirira, ngaazviite nemwoyo wese;+ uya anonzwira vamwe tsitsi, ngaazviite achifara.+ 9 Rudo rwenyu ngarurege kuva neunyengeri.+ Semai zvakaipa;+ batisisai zvakanaka. 10 Parudo rwenyu sehama, dananai nemwoyo wese. Pakukudzana, mumwe nemumwe wenyu ngaatange iye.+ 11 Shandai nesimba, musingaiti zveusimbe.+ Pisai nemweya.+ Shandirai Jehovha* sevaranda.+ 12 Farai patariro. Tsungirirai pakutambudzika.+ Rambai muchinyengetera.+ 13 Ipaiwo vatsvene zvavanenge vachishayiwa.+ Garai muchigamuchira vaenzi zvakanaka.+ 14 Rambai muchikomborera vaya vanokutambudzai;+ komborerai uye musatuka.+ 15 Farai nevanofara; chemai nevanochema. 16 Onai vamwe semaonero amunozviita; musaisa pfungwa dzenyu pazvinhu zvakakwirira, asi tungamirirwai nezvinhu zvakaderera.+ Musazviona semakachenjera.+ 17 Musadzorera chakaipa nechakaipa.+ Fungai zvakanakira vanhu vese. 18 Kana zvichiita, itai zvese zvamunogona kuti muve nerugare nevanhu vese.+ 19 Musatsiva, vadiwa, asi zvisiyirei kuna Mwari kuti aratidze hasha;+ nekuti zvakanyorwa kuti: “‘Kutsiva ndekwangu; ndichatsividza,’ anodaro Jehovha.”*+ 20 Asi “kana muvengi wako aine nzara, mupe zvekudya; kana aine nyota, mupe chekunwa; nekuti ukadaro unenge watutira mazimbe emoto pamusoro wake.”*+ 21 Usazvirega uchikundwa nezvakaipa, asi ramba uchikunda zvakaipa nezvakanaka.+
^ Kana kuti “mamiriro ezvinhu epanguva ino achikuumbai.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.
^ Kana kuti “sekugoverwa.”
^ Kana kuti “anobvisa mupiro.”